Ebe Listen Music Videos Online na APP
Na-ege ntị music ke laa bụ otu nke kasị mma atụmatụ nke onye ọ bụla nwere ike ịnụ ụtọ enweghị ihe ọ bụla hassle na nke na niile ekele na ngwa ọdịnala na e mepụtara na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na kasị mma ngwa na nke a bụ onye ahụ dị mfe iji na song nchọgharị na-mere ngwa ngwa. A nkuzi e dere ịnọgide na-ele ndị niile na atụmatụ mgbe ọ na-abịa usability mere na a onye ọrụ mgbe chọtara ya siri ike na-ege ntị music online nkwanye ya gafee otutu ngwaọrụ dị ka mma. The ngwa ngwa nyochaa ka Otú ọ dị a n'ihu n'okpuru:
2. Mmiri ara ehi Music
5. Slacker redio
7. Ada Cloud
9. Akụ na Radio
Download free music si na saịtị na TunesGo
• The kasị mma ngwa na mfe iji interface na usability dị ka kwa onye ọrụ nyochaa.
• The ngwa nwere pro nke nnukwu nchekwa data nke na-enye ohere ọrụ na-enwe songs.
• The ngwa nwere ahụhụ nke n'iyi na ụfọdụ glitches.
a. Onye ọrụ dị nnọọ mkpa ka ibudata ngwa iji jide n'aka na isi interface-egosi dị ka e gosiri na foto n'okpuru:
b. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na search etokwa iko na-enwe n'ihu n'ihu na nke a:
c. Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na mkpa Keywords na-banyere na ndepụta na-wetara elu nke mere na song a pịrị iji strimụ ya online.
Ọ na-ahuta ka otu nke kasị mma ngwa iji jide n'aka na ihe kasị mma na-eme ka onye ọrụ na mmekọrita nkwanye online music. Kụziri site na ike nke Samsung ọ na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a.
• The ngwa nwere usability nke oké ịgbatị na nwere nnọọ mma interface.
• The onye ọrụ nwere ike ozugbo egwu songs si DJ na-adịghị ga-esi n'ime ihe ọ bụla hassle
• The ọnụ ọgụgụ nke songs ka tụnyere ndị ọzọ ngwa ọdịnala bụ dịtụ ala-na-ole.
a. Onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ngwa na-ebudatara site na njikọ nke e nyere n'elu ibudata ya. The ngwa a ga-tapped nke mere na ọ ga-emepe:
b. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka pịa mkpa genre iji jide n'aka na ndepụta Pop elu na song a pịrị na-egwuri enweghị ihe ọ bụla hassle na imecha usoro:
oyiyi maka a oyiyi maka b
Ọ bụ otu n'ime ndị na ngwa na-bụ ukwuu na ina na-eme ka n'aka na ojiji dị mfe na ọkaibe. Onye ọrụ mba nke ngwa bụ ikenyeneke mbiet nakwa:
• The onye ọrụ nwere ike họrọ songs dị ka kwa genre na mkpokọta fim nke na-eme ka ọ dị mfe na-achọ.
• The ngwa e mepụtara site Pandora nke a na-mara maka ya media metụtara ọrụ.
• The ngwa bụ mgbe ụfọdụ na-adịghị na laggy nke bụ nanị mwepu na nke a.
a. Onye ọrụ kwesịrị ka ibudata ngwa ma na-agbaso kpaliri iji wụnye ya mere na n'elu-emeghe isi interface-egosi:
b. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka pịa atọ vetikal ntụpọ iji jide n'aka na search taabụ na-egosi na mkpa songs aha na-mesịa iji jide n'aka na needful a mere na nke a na songs na-ege ntị:
Ọ bụ a free ngwa nke na-eme n'aka na nke kacha mma e nyere onye ọrụ na onye ọhụrụ songs na-emelite na a ugboro ugboro n'ụzọ nke mere na onye ọrụ bụ na afọ ojuju na mgbe odụk ọ bụla hassle mgbe niile. Ọ na-otu nke kasị mma ngwa ọdịnala na-enwe a fim nke 4.2 nke 5.0
• The ngwa bụ nnọọ ìhè na loading na-eme ka n'aka na ndị kasị mma na ahụmahụ a na nyere onye ọrụ.
• The loading oge nke ngwa bụ ibu ngwa-ngwa nke na-eme ya otu nke kasị mma tech iberibe niile.
• The ngwa kwesịrị a revamp ka interface bụghị kenkwukorita.
a. Onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ngwa na-ibudatara na arụnyere. Ozugbo mere ya kwesịrị a mgbata nke mere na isi ihuenyo slides na:
b. Top n'akụkụ aka ekpe na atọ kwụ ọtọ a ga-tapped iji jide n'aka na-esote ihuenyo egosi. Site n'ebe a na Chọgharịa nhọrọ bụ-ahọrọ ịchọ songs mfe na-enweghị nsogbu na nke a kwa okokụre usoro:
Ọ maa achoghidi mmeghe na maka otu ihe ahụ ọ na-e gosiri dị ka onye nke kasị mma ngwa nke niile. Na ọkaibe ọrụ na interface onye ọrụ kwesịrị ime ihe ọ bụla dị ka fọrọ nke nta 90% nke ọrụ a na-eme site na ngwa.
• The ngwa e ike na ike nke olu search nke bụ ihe dị egwu atụmatụ.
• The ngwa bụ nnọọ mfe iji na maka otu ihe ahụ onye ọrụ fim dị nnọọ elu na nke a.
• Mgbe ụfọdụ ọ bụ ike chọta kpọmkwem egwuregwu nke song dị ka e nwere ọtụtụ iri puku results na gbapụta.
a. Onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ngwa na-ulo oru ka anya dị ka ọ na-e arụnyere:
b. The etokwa iko oyiyi bụ na-pịrị iji jide n'aka na song aha na-mesịa na mkpa rụpụtara na-wetara ka jide n'aka na gụgharia na-malitere:
A ma ama music ngwa na e mepụtara iji jide n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka onye ọrụ na okwu nke ojiji na usability.
• The kenkwukorita interface bụ ọkaibe na mfe
• The ngwa e mepụtara na-eburu n'uche ndị ọhụrụ na ọnọdụ
• Ọ na-mgbe ụfọdụ rapaara dị ka ọ bụ a glitch nke bụ nanị mwepu na nke a.
a. Onye ọrụ kwesịrị ka ibudata ngwa na o nwere ga-emeghe iji jide n'aka na usoro amalite:
b. Ka ọ bụla ọzọ ngwa na ọ bụ-ahụ kwuru na-etokwa iko oyiyi bụ na-pịrị iji jide n'aka na songs na-achọgharị na-egwuri ka e needful mere:
7. Sound Ígwé ojii
Isi website nke Sound Ígwé ojii bụ onye nke kasị mma weebụsaịtị nke bụ ma ama maka ewere music na-esonụ larịị. Ọ bụkwa ma ama nke na-eme n'aka na music na-egwuri online enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu:
• The ngwa bụ ihe kasị mma na-eme n'aka na songs na-egwuri enweghị ihe ọ bụla hassle na were were.
• Ọ na-na--ahụ kwuru na ngwa e kwalite na kwajuru na ọhụrụ songs nọgidere.
• The interface dị ka kwa ụfọdụ ndị ọrụ bụghị mara mma na nke a bụ nanị drawback dị ka ọ na-esikwa ike iji.
a. Onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na isi interface nke ngwa na-enweta n'elu igba egbe:
b. N'otu aka ahụ onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na-etokwa iko a pịrị na song aha odụk. Ozugbo ọ e mere ndị chọrọ N'ihi bụ na-pịrị na-egwu song:
Ngwa e ebudatara fọrọ nke nta 100,000 ugboro na ọ siworo kasị mma enyi nke ndị chọrọ igwu egwu songs enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
• The ngwa bụ ihe kasị mma na-enye ezubere iche results.
• Onye ọrụ nwere ike ime ka na-azọpụta listi ọkpụkpọ online.
• The interface nke ngwa kwesịrị ịbụ ihe mara mma iji jide n'aka na onye ọrụ na-enyocha ngwa a ọzọ.
a. Site na njikọ na e kwuru n'elu bụ na-pịrị iji jide n'aka na ngwa na-ebudatara na isi interface-egosi:
b. Ọ bụ mgbe ahụ ka-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ka pịa Chọgharịa taabụ ịchọ songs na ozugbo ndị chọrọ onye na-emi odude ọ bụ na-tapped na-egwu:
The music nkwado nke a ngwa bụ egwu na ọ na-ukwuu tụrụ aro n'ihi na ndị niile ndị ọrụ na-adịghị jikọọ na internet nọgidere mere na offline music na-ege ntị abụghị otu ihe iseokwu na niile:
• E wezụga music akwado ngwa na-enyekwa Podcast nkwado dị ka mma.
• The ngwa e gosiri elu ruru ya egwu ọdịdị na mkpokọta na atụmatụ nakwa.
• The interface nke ngwa bụ imetosi na a ga-kwalite izute choro nke ọrụ.
a. Ngwa, a ga-ibudatara na ozugbo echichi completes ọ bụ na-tapped ma ọ bụ pịrị:
b. The search taabụ na-ahụ na-pịrị ịchọta song na otu ugboro mere ya nwere na-tapped iji jide n'aka na ebre amalite na usoro-agwụ:
The YouTube achoghidi iwebata mgbe niile. Na karịrị 100 nde downloads n'ụwa nile na ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma music ngwa nke mgbe niile na-enye ntụrụndụ:
• E nweghị song na ụwa a na-adịghị na-achọgharị site a ngwa
• The nnukwu nchekwa data nke a ngwa bụ ọkaibe.
• The pụta bụ mgbe ụfọdụ imetosi na onye ọrụ nwere ịchọ ike maka chọrọ songs.
a. The ngwa a ga-ebudatara site na njikọ na e kwuru n'elu:
b. The "Gịnị na Watch" taabụ a pịrị na chọrọ song aha bụ-banyere nke mere na results slide na. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na song video a pịrị na-egwu ya:
Sound Ígwé ojii
Mmiri ara ehi Music
Ezi Nkezi Nkezi Nkezi Ezi Nkezi Ezi Ezi Ezi Ezi
Ezi Ezi Ezi Nkezi Nkezi Nkezi Ezi Nkezi Ezi Ezi
Ezi Nkezi Nkezi Ezi Ezi Ezi Ezi Ezi Ezi Ezi
Ezi Nkezi Ezi Nkezi Ezi Ezi Nkezi Ezi Ezi Ezi
Ezi Ezi Nkezi Nkezi Nkezi Ezi Ezi Nkezi Nkezi Ezi
Olee otú Download Music Torrent ma ọ bụ Music Album
Top 30 Single chaatị dị iche iche
> Resource> Music> Ebee ka Listen Music Videos Online na APP